Demoso ralzaam bawmhnak pek ahakal mi Sai Lin Lin Oo, May Zin Htoo le Nandar Oo Khin cu nihin tiang thawngtheih an si lo – Buanchukcho
Demoso ralzaam bawmhnak pek ahakal mi Sai Lin Lin Oo, May Zin Htoo le Nandar Oo Khin cu nihin tiang thawngtheih an si lo
May 26 lio, Demoso ralzaam bawmhnak pek ahakal mi Sai Lin Lin Oo, May Zin Htoo le Nandar Oo Khin cu nihin tiang pehtlaih khawh an si ti lo. Sai Lin Lin Oo cu SAC ralkap nih an tlaih, an ti ca ah nungak pahnih zong hi an tlaihchih ko hna lai dah, tiah PKPF nihatial.
၂၆ ရက်နေ့ ညနေ ဒီးမော့ဆို စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို စားနပ်ရိက္ခာပို့ဖို့ စိုင်းလင်းလင်းဦး ကားဖြင့် စိုင်းလင်းလင်းဦး အပါအဝင် မေဇင်ထူး နှင့် နန္ဒာဦးခင် ဒီးမော့ဆို ထီးပိုးကလိုးပဲသွားရောက်ပို့ဆောင်ပြီး ညနေ ၄ / ၅ နာရီဝန်းကျင်တွင် လွိုင်ကော်ပြန်လာတယ်လို့ သိရပါသည်။ အပြန်လမ်းမှာ အိမ်သို့မရောက်ပဲ ဒီကနေ့ အချိန်ထိ အဆက်အသွယ်လုံးဝမရဘူးဗျား။
သတင်းကြားရတော့ စိုင်းလင်းလင်းဦး တော့ စစ်ခွေးတို့မှ ဖမ်းဆီးသည်ဟု သိရပါတယ်။ အကယ်၍သာ စိုင်းလင်းလင်းဦး ဖမ်းမိရင် ဒီခလေးမ နှစ်ယောက်လည်း အဲထဲမှာ ပါသွားတာသေချာနေပြီလော…. သူတို့ မိဘလည်း စိတ်ပူနေပြီ။ သူတို့ သုံး ဦး ဘယ်ပဲရောက်ရောက် နေကောင်းကျန်းမာပါစေ လို့ ဆုတောင်းတာကလွဲပြီး ကျနော်တို့လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ သူတို့အတွက် Speakout လုပ်ပေးကြပါ။ စိုင်းလင်းလင်းဦး – ၂၉ နှစ် နန္ဒာဦးခင် – ၁၉ နှစ် မေဇင်ထူး – ၂၀ နှစ်. The Hakha Times
Zual Ko : Apoi Tuk Hringhran Ko E Nihin Gangaw Pawng Ah Ralkap Nih Sianginn Saya Pa Meithal In An Kah I A Nunnak Liam
Laiholh Tein Phuan Mi Thawngpang A Fiang Kho Taktak (+Video)